विना धितो ऋण लगानी गर्न डराएका छौं | गृहपृष्ठ
Home अन्तरवार्ता विना धितो ऋण लगानी गर्न डराएका छौं
प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, प्रबन्धक, कृषि विकास बैंक रुकुम
संघीय संरचनाअनुसार दुई जिल्लामा विभाजन भएसँगै रुकुममा आर्थिक गतिविधि शून्यप्रायः छ । ठूलाठूला उद्योगधन्दा खुलिनसकेको अवस्थामा जिल्लामा घरजग्गा कारोबार, होटेल व्यवसाय र अन्य व्यवसायमा समेत ठूलो गिरावट आएको छ । यस्तो अवस्थामा किसानको घरआँगनको बैंक कृषि विकास बैंकले आफ्ना गतिविधि कसरी अगाडि बढाएको छ ? कृषि विकास बैंकका आगामी योजना कस्ता छन् ? र रुकुम जिल्लामा कृषि क्षेत्रमा लगानीको अवस्था कस्तो छ ? भन्ने विविध विषयमा केन्द्रित रही कृषि विकास बैंक, रुकुमका प्रबन्धक प्रकाशकुमार श्रेष्ठसँग आर्थिक अभियान दैनिकका लागि संवाददाता प्रवीर ददेलले गरेको कुराकानीको सार :
रुकुम जिल्लाको समग्र बैंकिङ क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ ?
रुकुम जिल्ला भौगोलिक हिसाबले निकै सुन्दर जिल्ला भए पनि आर्थिक दृष्टिकोणले कमजोर जिल्लाको रूपमा रहेको छ । विशेषगरी संघीय संरचनामा रुकुम दुई जिल्लामा विभाजन भएकाले पछिल्लो समय रुकुमको सदरमुकाम आसपासमा घरजग्गा कारोबार न्यून रहेको छ । यस क्षेत्रमा ठूला–ठूला उद्योगधन्दा कलकारखाना नहुनु र पछिल्लो समय व्यापार व्यवसायका साथै होटेल व्यवसायमा समेत गिरावट आएका कारण आर्थिक गतिविधि शून्यप्रायः छ । तर कृषि, जडीबुटी र जलविद्युत् क्षेत्रको सम्भावना निकै राम्रो रहेको छ । यस क्षेत्रमा लगानी प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।
रुकुममा कृषि विकास बैंकले कुनकुन क्षेत्रमा लगानी गरेको छ ?
रुकुममा कृषि विकास बैंक २०३० सालमा स्थापना भएको हो । चालू आवमा मात्रै यस बैंकले २८ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ । यस बैंकमा विपन्न किसानदेखि उद्योगी व्यापारीसम्मको सहज पहुँच भएकाले सबै क्षेत्रमा लगानी भएको छ । तापनि कृषि विकास बैंक किसानको बैंक भएका कारण कृषि क्षेत्रमा बढी लगानी गरिएको छ । कृषिमा कुल लगानीको ३५ प्रतिशत लगानी गरिएको छ । यसका साथै व्यापार, घरायसी, सेवालगायत क्षेत्रमा लगानी गरेका छौं । आगामी दिनमा कृषिक्षेत्र सँगसँगै व्यापार, पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्ने योजना रहेको छ । साथै, आकर्षण ब्याजदरमा नयाँ बचत योजना ल्याउने तयारी गरेका छौं ।
कृषि विकास बैंकले ग्राहक आकर्षित गर्न केकस्ता योजना अघि सारेको छ ?
कृषि विकास बैंकमा ग्राहकको आकर्षण बढी नै छ । तापनि बैंकको ५२औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा केही ग्राहक लक्षित योजना अघि सारिएका छन् । जसमा अनलाइन बैंकिङ सेवा, एटीएम, मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, एएसबीए र सीएएसबीए जस्ता अत्याधुनिक सेवासमेत सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका छौं । यसका साथै ग्राहक लक्षित निक्षेपतर्फ एडीबीएल तलबखाता, शेयर होल्डर बचत खाता, कृषक बचत खाता, बाआमा बचत खाता, चेतनशील नारी बचत खाताजस्ता खाता सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ । आगामी चैतदेखि आधुनिक र निक्षेपतर्फ आकर्षित खाताहरू सञ्चालन हुनेछन् । एडीबीएल बचतखाता सञ्चालन गर्ने निक्षेपकर्तालाई कम ब्याजदरमा संस्थागत जमानतमा कर्जा उपलब्ध गराउने नयाँ योजना रहेको छ ।
अरू बैंक र कृषि विकास बैंकमा फरक के छ ? कृषि विकास बैंकमै कारोबार गर्नुपर्ने कारण ?
कृषि विकास बैंकको आफ्नो छुट्टै छवि छ । यो बंैक स्थापना भएको ५२ वर्ष भयो । यसको पहुँच गाउँका निमुखा किसानदेखि ठूला व्यापारी घरानासम्म रहेको छ । बैंकको नामले गर्दा पनि किसान बढी आकर्षित छन् । त्यस्तै, सरकारी बैंक भएकाले पनि किसान मजदुरको ध्यान केन्द्रित भएको हुन सक्छ ।
कृषि विकास बैंक, रुकुममा लामो समयदेखि तरलता अभाव रहेको समाचार बाहिर आइरहेका छन् । यस्तो समस्या समाधान गर्ने केकस्ता उपाय अपनाउनु भएको छ ?
कृषि विकास बैंकको रुकुम शाखामा मात्र होइन, सबैतिर केही समय तरलता उत्पन्न भएको थियो । अहिले रुकुम शाखामा तरलता अभाव हटेको छ । बैंकले अहिले नयाँनयाँ प्रोडक्ट पनि ल्याएको छ । बचतमा राम्रो ब्याज पनि दिएको छ ।
कृषि विकास बैंकमा गरीब किसानको पहुँच नपुगेको जनगुनासो सुन्न पाइन्छ, यस विषयमा के भन्नुहुन्छ ?
त्यो साँचो होइन । किनभने सबैभन्दा बढी कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेका कारण पनि यस्तो गुनासो सही हो जस्तो लाग्दैन । हुन सक्छ, हाम्रो मापदण्डभन्दा बाहिर भिरपाखामा रहेका जग्गा धितो राखेर ऋण लिन खोज्ने किसानले यस्तो गुनासो गर्नुहुन्छ होला । तर, बैंकको मापदण्डभित्र रहेर ऋण खोज्ने किसानलाई लगानीका लागि ऋण दिन कृषि विकास बैंक सधै तयार छ ।
केही वर्षपहिले यस बैंकले लागू गरेको युवा स्वरोजगार कर्जाको अवस्था कस्तो छ ?
रुकुममा २०६९ सालमा विनाधितो युवा स्वरोजगार कृषि कर्जा लगानी गरेका थियौं । त्यसबेला हामीले नेपाल सरकारबाट ६३ जना युवालाई झन्डै १ करोड रुपैयाँ लगानीका लागि प्रदान गरेका थियांैं । जसमध्ये अझै पनि ३३ जनाबाट साँवा ३९ लाख र ब्याज झन्डै २८ लाख असुल गर्न बाँकी छ । यसमा विशेषगरी ठूला नेता र पहुँचवाला व्यक्तिबाटै असुल गर्न समस्या भएको छ । त्यसका लागि हामीले जिल्ला मालपोत कार्यालय गएर १७ जनाको जग्गा रोक्का गरिदिएका छौं । पछिल्लो समय नेपाल सरकारले कृषि, उद्यमजस्ता क्षेत्रमा विनाधितो ऋण लगानी गर्ने भनेको छ । पहिलेको अवस्थाले गर्दा विनाधितो ऋण लगानी गर्न हामी डराएका छौं ।
अन्त्यमा समग्र रुकुमवासीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
कृषि विकास बैंक नेपालको स्थापित बैंक हो । यस बैंकमार्फत विभिन्न अत्याधुनिक सेवाहरू सुचारु भएका छन् । तपाई हाम्रो घरआँगनको बैंक भएकाले यसलाई अझै माया गर्नुहोस् । यस बैंकमा विभिन्न सेवा सुविधासहितका खाता खोलेर लाभ लिनुहोस् भन्न चाहन्छु ।
कृषि विकास बैंक : कम्पनी विश्लेषण (बिहीवार, २३ जेठ २०७६)
कृषि विकास बैंकको बोनस शेयरधनीको हितग्राही खातामा जम्मा, कति प्रतिशत ?
नेप्सेमा दूई कम्पनीको बोनस सूचीकृत
चालू आवको ९ महीनामा कृषि विकास बैंकको नाफा २ अर्ब २१ करोड